Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Tilmaamaha sida loo doorto tuubada musqusha ee saxanka wanaagsan
2021 / 01 / 10 QoondayntaTilmaamaha qasabada 3951 0
Shaqaale kasta oo xafiiska ka mid ahi wuu ogyahay in markii lagu qasbo in subax kasta nala toosiyo, haddii aan rabno inaan ka takhalusno hurdo la'aanta sida ugu dhakhsaha badan, saaxiibbada qaarkood waxay ku degdegi doonaan musqusha si ay berkadda biyo uga buuxiyaan una galaan berkedda. Markaa neef qoto dheer qaado, sifiican u eeg, oo mar labaad u dhoola caddee muraayada. Taasi waa sax, sida tan oo kale, maalin cusub ayaa bilaabmaysa. Maalin walba waa cusub tahay, maalin walbana waxaa ka buuxa mala-awaal aan xad lahayn… Dooxada ayaa muhiim u ah shaqaalaha xafiiska illaa xad. Waxay u eg tahay muraayad, sida ugu badan ee aan jecelnahay Qofkeenna aadka u jecel wuxuu daryeelaa nolosheena wuxuuna na siiyaa kalsooni maalin ah. Marka, sidee u doorataa barkad kugu habboon? Halkan, waxyaabaha soo socda ayaa loo taxay inay noqdaan hage milkiilayaasha.
Waqtigan xaadirka ah, qalabka weelasha lagu dhaqo ee kuyaala suuqa waxay noqdeen kuwa aad iyo aad u midab badan oo leh shuruudaha shaqsiyadeed ee dadka, laakiin alaabada dhoobada ayaa wali ah xulashada koowaad iyo tan koowaad Sidaa darteed, glaze dhoobada ayaa aad muhiim ugu ah nooca weelka lagu dhaqo. Muraayaddu waxay si toos ah u saameyn doontaa tayada wax soo saarka. Dhaldhalaalka jilicsan maahan oo kaliya ka hortagga wasakhda, wuxuu ku habboon yahay nadiifinta, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay astaamo antibacterial xoog leh. Markaad xulaneyso, waxaad si taxaddar leh u eegi kartaa dusha sare ee sheyga hoostiisa iftiin xoog leh. Way kafiican tahay inaadan lahayn trachoma ama godad, dhalaalka dhalaalkuna waa siman yahay, jilicsan oo siman. Intaas waxaa sii dheer, nuugista biyaha ayaa sidoo kale aasaas muhiim ah u ah tayada weelka dhoobada lagu dhaqo. Hoos u dhuujinta nuugista biyuhu, tayada ayaa ka sii wanaagsan, iyo sida ugu fiican ee dhalaalku u yahay, hoos u dhuujinta nuugista biyuhu si yar ayey u hadlaysaa. Waxa kale oo jira dhagax macmal ah iyo saxanno muraayado wasakhaysan leh. Weelka dhagaxa macmalka ah wuxuu leeyahay iska caabin saameyn adag mana sahlana in la waxyeeleeyo; berkedda weelka dhalada leh waxay leedahay gudbinta iftiinka wanaagsan waana ka qurux badan tahay.
Weelasha lagu dhaqo dhoobada ee lagu isticmaalo musqusha ayaa inta badan loo qaybiyaa sagxadaha miisaska iyo sagxadaha hoose. Tirada tixraaca ee lagu dooranayo berkedda ama berkeda hoose waa ballaca iyo dhererka booska rakibidda. Guud ahaan marka laga hadlayo, illaa iyo inta ballaca miiska dushiisa uu ka weyn yahay 52 cm dhererkiisuna ka weyn yahay 70 cm, qolka lagu dooranayo weelka miisaska aad u weyn. Haddii dhererka miiska dushiisa uu ka yar yahay 70 cm, maya Waxaa lagugula talinayaa inaad dooratid saxanka halkii aad ka dooran laheyd saxanka hoose. Haddii aad doorato saxanka, saamaynta rakibaadda ayaa saameyn doonta, xulashada saxanka ayaa adkaan doonta.
Guud ahaan marka laga hadlayo, qaabeynta meelihii la dhisay ayaa ah mid aad u fudud. Sababtoo ah qaybaha bullaacadaha ayaa lagu qarin karaa sadarka wejiga hoose, waxay dadka siisaa muuqaal nadiif ah oo hagaagsan. Intaa waxaa sii dheer, marka gacmaha la dhaqo, jidhka bini'aadamka ayaa istaagi kara wejiga hortiisa si dabiici ah. Sidaa darteed, way ka habboon tahay oo raaxo badan tahay in la isticmaalo. Weelka weelka lagu dhaqo ayaa ku habboon in lagu rakibo musqusha oo leh meel ballaadhan. Waxaa loo isticmaali karaa iyada oo lala kaashanayo dhagaxa dabiiciga ah ama miisaska dhagxaanta dabiiciga ah. Waxa kale oo aad u habeyn kartaa armaajooyinka musqusha hoostiisa si ay ugu jiraan alaabada musqusha, taas oo qurux badan oo wax ku ool ah. Naqshad yar oo ka samaysan sagxadda hoose ayaa sidoo kale dadka siin karta dareen qabow, oo dusha sare ee quruuruxdu wuxuu kobciyaa jawiga qallafsan ee booska.
Saxanadaha miisaska loo qaybiyaa waxay u qaybsan yihiin laba nooc: korka miisaska ka hooseeya iyo ka hooseeya saxanka miiska. Tani kuma kala duwana saxanka laftiisa, laakiin waa kala duwanaanshaha rakibaadda. Weelka ka soo baxa miiska dushiisa waxaa loo yaqaan 'basin-ka' kor ku xusan, iyo weelka gebi ahaanba ka hooseeya miiska dushiisa waxaa loo yaqaan 'basin underinunter'. Rakibaadda weelka miisaska dushiisa waa mid fudud. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka furto god meesha horay loo sii dejiyay ee ku yaal dusha sare sida ku cad sawirka rakibidda, ka dibna ku rid weelka godka, oo ku buuxi farqiga dhalada dhalada ah. Markaad isticmaaleyso, biyaha saaran miiska dusha kama soo daadan doono farqiga, sidaas darteed Waxaa loogu isticmaalaa qoyska intiisa badan. Iyo sababta oo ah saxanka kor ku xusan wuxuu sameyn karaa isbeddelo badan qaab ahaan, waxaa jira meel badan oo loogu talagalay xulashada qaabka, iyo saameynta qurxinta ayaa ku habboon. Kadib rakibida saxanka hoostiisa kujira, muuqaalka guud waa mid nadiif ah oo sahlan in la daryeelo, laakiin wadajirka u dhexeeya saxanka iyo miiska dushiisa ayaa ka fudud in wasakh iyo wasakh ku jiro, basinka ka hooseeya miiskuna wuxuu u baahan yahay tiknoolajiyad rakibid sare leh ; marka labaad, sababtoo ah hoosta miiska hoostiisa qaanso-gacmeedyadu way istaroogan yihiin oo kala-goynta iyo isu-ururintu way dhib badan yihiin. Haddii dhererka miisku yar yahay, way adag tahay in la hubiyo tayada rakibidda inta lagu jiro rakibidda. Intaa waxaa dheer, qaabka hoostiisa hoostiisa waa mid fudud, waxa kaliya ee loo isticmaali karaa waa midabka iyo qaabka miiska.
Safka darbiga ee ka hooseeya saxanka miiska ayaa ku habboon qaabka qurxinta ee fudud, iyo miisaska dheeriga ah ee dheeriga ah waxaa loo isticmaali karaa in la dhigo maacuunta iyo qurxinta.
Dad badan ayaa kala kulmay dhibaatooyin badan xulashada midabka tuubada mana garanayaan sida loo doorto. Waxaan kugula talinayaa makiinada weelka madow ee weelka madow. Madadaalada weelka madow waa midabka xulashada musqulaha dhalinyarada badan, oo ku dari kara jawi qurux badan musqusha. Madow heer sare ah, oo dadka siiya dareen gaar ah, mood iyo qabow leh.
The mato qasabadda madow waa habka korantada, taas oo aan sahlaneyn in miridh iyo rinji la sameeyo, oo cimri dheeri ah. Waxaad mudan tahay inaad yeelato.
Haddii lagu qeexo sida loo rakibo booska, weelka maydhisu wuxuu leeyahay berked gees ah iyo saxan caadi ah, barkadda geeskuna waxay leedahay beel gaar u qaabeysan iyo weel geeska qaabeeya oo joogto ah. Waxa loogu yeero berkedda caadiga ah waxaa loola jeedaa weelka lagu dhaqo ee aan loogu talagalin rakibaadda geeska, sidoo kale waxaa jira qaabab gaar ah oo caadi ah.
Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto: sales@wowowfaucet.com
Hore:: Talaabooyinka Hagaha oo Dhamaystiran Sida Loogu Rido Giraanta Tuwaalka Next: Qaab dhismeedka iyo soosaarida qasabada madow
2021 / 01 / 28 3721